Gédéon Rajaonson “Tokony hisy modely mazava ny fampandrosoana ara-toekarena”
Fanamboarana ny Lakandranon`i Pangalana Hisy akony tsara amin’ny toekarena
Mponina 3 tapitrisa no hisitraka izao tetikasa izao, avy amin’ny kaominina Toamasina, Ambila Lemaitso, Andevoranto, Vatomandry,
Miezaka mametraka ny modely ara-toekarena (modèle économique) ny mpitondra any amin’ny firenena rehetra hatraty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana. Misy aza mangalatahaka fotsiny izao ary matetika maro no milaza fa ny any amin’ny firenena tandrefana no tsara.
Mazàna anefa izy ireny no tsy mifanaraka amin’ny toe-draharaha misy marina sy ny vinam-pampandrosoana azo tanterahina. Raha ny eto Madagasikara izay sokajiana ho firenena mahantra dia tsy tena mazava ary tsy hita taratra izay tena modely ara-toekarena ampiharina, hoy i Gédéon Rajaonson. Miteraka tsy fahombiazana izany satria tsy mazava ny lalan-kaleha. Indraindray aza dia teren-ko masaka tahaka ny voalobo-jaza fotsiny ny fandraharahana sy ny politikam-pampandrosoana atao kanefa tsy mety amin’ilay firenena. Nanambara ny tenany fa ny fahaizana mitrandraka ny harena rehetra misy ara-tsaina (capital humain), ankibon’ny tany, an-dranomasina eo amin’ilay firenena ihany no hampandroso azy. Mbola nohamafisiny hatrany ny maha zava-dehibe ny fampivoarana ny sehatra fanabeazana eto Madagasikara mba hifehezana izany. Maro aza ireo mpianatra Malagasy mandalina toekarena saingy sarotra amin’izy ireo ny manakatra sy mahazo ny modely ara-toekarena misy sy tokony hampiharina eto. Mila mamakafaka tsara ny Malagasy, indrindra ireo tanora hoavin’ny firenena mba tsy ho variana amin’ny teoria be fahatany kanefa tsy mahafantatra ny modely izay hamotika na hanangana indray ny firenena.